Kooxda Manchester United oo xaqiijisay in Eric Bailly uusan markale u ciyaari doonin xilli ciyaareedkan – Gool FM
Kooxda Manchester United oo xaqiijisay in Eric Bailly uusan markale u ciyaari doonin xilli ciyaareedkan
Haaruun April 29, 2019
(Manchester) 29 Abriil 2019. Difaaca Manchester United ee Eric Bailly ayaa seegi doona labada kulan ee ugu dambeeya horyaalka Premier League iyo xitaa tartanka qarammada Afrika sida kooxdu xaqiijisay.
Xiddiga xulka qaranka Ivory Coast ayaa la dhibtoonaya dhaawac soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii xalay barbaraha 1-1 ku dhammaaday ee ka dhacay garoonka Old Traffrod kaasoo dhex maray kooxaha Man United iyo Chelsea
Bailly ayaa dhaawacan uu soo gaaray markii ay isku dhaceen laacibka Blues ee Mateo Kovacic qeybtii labaad ee kulankii xalay, taasoo keentay in garoonka laga saaro.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa kulanka kaddib sheegay in 25-sano jirkaan ay u badan tahay inuu seegayo labada kulan ee Man United u harsan Premier League ee ay la kala ciyaari doono Huddersfield iyo Cardiff, isla markaana rajadii uu dalkiisa kalahaa inuu metelo xagaagan ay sidoo kale soo dhammaatay.
Ivory Coast oo ka mid ah dalalka loogu jecel yahay tartanka qarammada Afrika ayaa waxa ay ka qeyb geleystaa tartankan oo lagu qabanayo sanadkan 2019 dalka Masar inta u dhaxaysa 21 June ilaa 19 July.
Bayaan lagu daabacay Website-ka rasmiga ah ee kooxda ayaa u dhignaa: “Waxaan xaqiijin karnaa in difaaca Manchester United ee Eric Bailly uu la dhibtoonayo dhaawac ka soo gaaray Jilibka midig intii lagu guda jiray kulankii Premier league ee aan wajahnay Chelsea kaasoo ka dhacay Old Trafford Axaddii xalay.”
“Dhibaatadan ayaa la minco ah in xiddiga xulka qaranka Ivory Coast uusan u ciyaari doonin Man United xilli ciyaareedkan, isagoo seegi doona kulamada horyaalka ee aan wajahayno Huddersfield Town iyo Cardiff City.”
“Intaas waxaa sii dheer in Bailly uusan sidoo kale awoodi doonin inuu ka qeyb galo tartanka soo socda ee Koobka qarammada Afrika.”
Bailly ayaa xalay ka soo muuqday kulankiisii ugu horreyay tan iyo markii uu garoomada ka maqnaa kulankii Champions League ee ay la ciyaareen Paris St Germain 6 bishii Maarso.
Bailly ayaa sidoo kale waxa uu qolka daawaynta kula biiray difaacyada dhexe ee kooxda Phil Jones iyo Chris Smalling kuwaasoo dhaawacyo ku maqan, iyadoo labadaan xiddig ee reer England ay seegeen kulankii xalay ee Chelsea.
Kooxda Chelsea oo soo bandhigtay Maaliyadda ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub...+SAWIRRO
Manchester United oo 120 milyan oo Euro ku soo qaadanaysa bedelka goolhayaheeda David de Gea